Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Faransiiska » Ma ammaan bay ku tahay Paris mudaaharaadyo waaweyn iyo COVID?
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Faransiiska • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Xuquuqda Aadanaha • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Paris ayaa curyaamisay iyadoo kumanaan qof ay ka mudaaharaadayaan ka-gudubka caafimaadka COVID-19
Kuwa aan weli qaadan tallaalka COVID-19, ama aan qorsheynin haba yaraatee, waxay ku andacoodaan in kaarka caafimaadku uu hoos u dhigayo xuquuqdooda oo uu u rogo muwaadiniinta heerka labaad.
Mudaaharaadyo waaweyn ayaa ka qarxay Faransiiska oo ka dhashay kaadhadhka caafimaadka ee COVID-19.
In ka badan 200 oo mudaaharaad ayaa maanta loo ballansan yahay Faransiiska.
Muwaadiniinta Faransiiska oo ka soo horjeeda waxa ay ugu yeereen ku tumashada xuquuqda dadka.
Dadweyne aad u tiro badan oo mudaaharaadayaal ah ayaa buux dhaafiyay waddooyinka Paris Sabtidii, taasoo keentay in dhammaan dhaqdhaqaaqyadii magaalada ay hakad galaan isla markaana curyaamiyaan caasimadda Faransiiska.
Kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa socod ku maray Boulevard Saint-Marcel oo ku taal koonfur-bari ee magaalada iyaga oo ku sii jeeday Place de la Bastille, iyaga oo ka soo horjeeda waxa ay ugu yeereen ku tumashada xuquuqda dadka.
Isku soo wada duuboo, in ka badan 200 oo bannaanbax oo looga soo horjeedo waxa loogu yeero kaarka caafimaadka ee COVID-19 ayaa loo qorsheeyay Sabtida guud ahaan France.
Dadku waxay siteen boodhadh ay ku qoran yihiin 'Jooji', iyagoo ku dhawaaqaya 'Xorriyad' iyo durbaanno garaacaya. Qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa la arkay iyagoo xiran jaakado huruud ah - astaan ​​u ah dhaqdhaqaaq kale oo weyn oo mudaaharaad ah kaas oo si firfircoon uga socday Faransiiska muddo hal sano iyo bar ah intii u dhexeysay Oktoobar 2018 iyo Maarso 2020.
Ilaa 2,000 ayaa ku soo biirey socodka, sida ay sheegtay warbaahinta Faransiiska. Goobta de la Bastille, oo ah halka socodku ka socday, ayaa boolisku sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday koox mudaaharaadayaal ah oo doonayay inay ku biiraan mudaharaadka.
Dibadbaxayaasha ayaa sidoo kale isku dayay inay dhowr jeer oo kale ka weecdaan waddada weyn ee socodka ee Paris, taasoo keentay in booliisku soo farageliyo, warbaahinta Faransiiska ayaa werisay. Isu soo baxyada ayaa si nabadgelyo ah ku socday haddii kale.
Kulamo waaweyn ayaa sidoo kale lagu arkay qaybaha kale ee Paris. Wadar ahaan shan isu -soo -bax ayaa lagu ballansanaa caasimadda Faransiiska Sabtidii. Dadweyne aad u fara badan ayaa isugu soo ururay meel u dhow Taallada Eiffel. Dibadbaxayaasha ayaa lulayay calanka qaranka Faransiiska, waxaana ay wateen calan weyn oo oranji ah oo ay ku qorneyd ereyga ‘Xorriyad’.
Kooxda Kubadda Cagta ee Subaru iyo MLS oo Marti -ku -Noqon Doonta Maalinta Eeyga ...
IATA waxay bilawday shahaadada batteriga lithium cusub
Golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay ayaa magaalada New York ee dalka Mareykanka ku soo dhaweeyay...
Booqdayaasha ajnabiga ah ee la tallaalay oo kaliya ayaa loo oggolaan doonaa inay ...
Ku dhawaad ​​1 Milyan oo Robots ah oo hadda yaalla Warshado Shiinaha ah